I-Apple Pay ezinye iindlela zokuhlawula zedijithali zifumene ukuthandwa ngo-2020 IPhone iindaba
I-Apple Pay ezinye iindlela zokuhlawula zedijithali zifumene ukuthandwa ngo-2020
UIgnacio Sala | 03/03/2021 12:00 | Apple Pay
Kuwo wonke unyaka we-2020, abasebenzisi baqala ukusebenzisa, ngaphezulu kwesiqhelo, intlawulo yokuqhagamshelana, nokuba kungamakhadi etyala, nge-Apple Pay, ngeSmart Pay, ngoGoogle Pay okanye nangayiphi na iqonga lokuhlawula elingelolokwenyama, ukunciphisa, kangangoko kunokwenzeka, uqhakamshelwano kwaye ukwazi ukufumana i-coronavirus.
NgokukaJim Johson weSisombululo soMthengisi, enkosi kolu tshintsho kwindlela yokuhlawula, ubhubhane Isisondeze kwikamva elingenamali kwikamva, isibhakabhaka esinganyanzelekanga ukuba sisondele, kodwa into ecacileyo kukuba iza kufika kungekudala okanye kamva.
Ukusetyenziswa kwemali ngo-2020 yehle nge-10%, kwaye yabalelwa kwisihlanu kuphela sayo yonke intlawulo yobuso ngobuso eyenziwe kwihlabathi liphela. Kwamanye amazwe afana neCanada, France, United Kingdom, Sweden, Norway ne Australia, ukusetyenziswa kwemali kuye kwancitshiswa ngaphezulu kwesiqingatha ngokwe Merchant Solutions.
Kuyo yonke i-2019, iintlawulo zemali ezivenkileni eMelika ifikelele kwi-1,4 yezigidi zeedolaKweli lizwe, ukongeza kwi-Apple Pay, i-Samsung Pay kunye neGoogle Pay, kukho nezinye iindlela zokuhlawula ezingafakwanga ezinjengezo zinikezelwa yiBestBuy, iSephora kunye neStarbucks phakathi kwezinye.
Ummandla weAsia-Pacific, kukhokelele ekusebenziseni iintlawulo zedijithali nge40% yazo zonke iintlawulo ezivenkileni. E-United States eli nani limi kwi-10%, ngelixa i-Europe iyi-7%, kwi-Latin America i-6% naku-Mbindi Mpuma i-8%.
Urhwebo ngombane, enye yeefayile ze- Abaxhamli abakhulu balo bhubhane, yabona indlela abasebenzisi abonyuse ngayo inkcitho nge-19%, ukufikelela kwi-4,6 yezigidigidi zeedola, ukukhula okuphezulu kule minyaka mi-5 idlulileyo kwaye kunokukhula ukuya kwi-7,3 trillion ngowama-2024.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » I-Apple Pay ezinye iindlela zokuhlawula zedijithali zifumene ukuthandwa ngo-2020
UFantasian, ovela kubadali beFinal Fantasy, uyeza kungekudala kwiApple Arcade
Kwisithuba esingaphantsi konyaka iSpotify igqithile kwiiPodcats zika-Apple